Ngaba inzuzo ka-Boris Johnson ngumanduleli weNexit? Uqikelelo lwam kwi-Europe: Martin Vrijland
Ngaba inzuzo kaBoris Johnson ngumanduleli weNexit? Uqikelelo lwam eYurophu
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	kwi-14 Disemba 2019	• 5 Comments
Ngokuphumelela okumangalisayo kukaBoris Johnson, i-United Kingdom ibonakala ikwazi ukubaleka ngokuthe ngqo kwi-EU. Yintoni eseleyo kwingqikelelo yam yokuba iBrexit iyakuphela kwingxoxo? Ewe, yayisele ingumbambano, kuba uTheresa May wayekhathazekile kangangokuba washiya isiponji esilixabiso elikhulu seJohnson kuthethathethwano ne-EU. Wayenyanzeliswa ukuba amkele isivumelwano esibi ukuthintela iBrexit enzima kunye nokunyanzela ilizwe ukuba liye kunyulo. Umsebenzi kaMeyi wokudideka nawo ukhokelele ekuqinisekisweni kukaJohnson.
Ipalamente yase-Bhritane yayinesicwangciso-nkqubo sikaBoJo sokuphuma neBrexit enzima kunye nje akukho nto ihlawulayo Ukhatywa kulo nyaka uphelileyo, ngoko ngoku wayenenketho yokuyishiya ithambile. Nangona kunjalo; Nokuba ungaqhela kanjani, i-UK inokwenza umgaqo-nkqubo wayo kwakhona kwaye nemithetho yaseBrussels kunye nemithetho ayinakuphinda inyanzelwe ngomqala njengoko yenzeka kuthi. Ke kutheni le nto ityala? Kungenxa yokuba asikho okwangoku kwaye iya kuba ngathi i-EU ishiya i-UK amashumi ezigidi izakuxabisa. Lelona xabiso abantu baseBritane abaya kuziswa nalo.
Uloyiso lonyulo lukaJohnson lunika ithemba kumaqela afana neFvD (Iforum yedemokhrasi) kwi-Nexit. Nangona kunjalo, ndiyakuxelela ukuba wonke umdlalo kubandakanya iBrexit ngokupheleleyo uyilo. Ibhekiswa kwa-A ukuya ku-Z. Ngoku uzakuphikisa ukuba le yinto ayinokwenzeka kuba kuye kwakho inkqubo yedemokrasi e-UK ngokucacileyo, apho abantu sele bethetha nje. Ucinga ntoni xa ndisithi aba bantu khange bathethe, kodwa ukuba isiphumo seendaba ezilungileyo zithetha? Inzuzo kaDonald Trump e-US yayisisiphumo sesicwangciso sobuchule sokuthengisa esifanelekileyo. Ukucaphukisa ngokucacileyo abantu ngakwesobunxele kunye nokubonisa ngokucacileyo ukuba eyona nto iphambili kwicala lezopolitiko, lihlanganiswe nenyaniso eninzi ngakwesokunene, kukwenza uqhubele abantu kwicala elithile. Ukuba kwakhona ubonakalisa ngokucacileyo ukuba imithombo yeendaba isekhohlo ngokupheleleyo, utyhalela abaninzi ngasekunene.
Ngoku kunokuphikiswa ukuba u-Boris Johnson akachanekanga ngokucacileyo, kodwa abapolitiki bafana ne-chameleon kwaye banokufaka umfanekiso wabo kwisandi esifunayo kwiziphumo ezininzi zonyulo kunokwenzeka. Ngokomgaqo, ukushiya i-EU kuthathwa njengelungelo (lokuchasana nehlabathi).
Iinkampani ezifana Cambridge Analytica sele ibonakalisile indlela ekujoliswa ngayo umsebenzi omncinci ngokuqokelela idatha enkulu kwaye icaca gca indlela amajelo eendaba ezentlalo asasazwa ngayo ziiNGO (ezinje ngeGreenpeace ne-Extinction Rebellion zihlawula izishoshovu zazo) kwingxoxo kwiiwebhusayithi, iibhlogi, iivawu, ukuthumela i-twitter, i-Facebook kunye ne-Instagram. Zonke iinkcukacha zedatha enkulu kuzo zonke ezo zixhobo zilungileyo zithwalwa ngumntu wonke imini yonke imini zibonelela ngengqiqo ehlelelekileyo kwiimpendulo zengqondo kuyo yonke impembelelo. Ngubani namhlanje ongenayo iwotshi entle kangaka ekwaziyo ukubeka esweni izinga lentliziyo kunye noxinzelelo lwegazi? Ukujolisa kwiMicro kuthetha ukuba uyazi, umzekelo, ukuba yeyiphi inkqubo yeTV okanye yerediyo umntu othile obukele okanye amameleyo kwaye abeva, babone kwaye baziva kanye ngendlela abantu abasabela ngayo kuyo ngokusebenzisa izixhobo zokusebenzisa ulwazi kwiikhompyuter, ngefowuni kunye neewotshi ezifanelekileyo.
Ngokumalunga noku ndinokukholelwa kwakhona ukuba le ayenzeki kwaye kukho umthetho wokutsibela kuphela ukunqanda ubunqolobi, kodwa oku kubonakala ngathi akukho ngqiqweni kum. Isindululo sam kukuba iziphumo zonyulo aziyiyo eyokwenzeka kwaye abagxeki eluntwini bakwanjalo yenziwe ngononophelo amanqaku 'ekunene' (ngesiNgesi: iphiko lasekunene). Ngoku njengokuba uJohnson ebonakala ephumelele, uninzi luzonwabisa kwaye ilungelo liqala ukuba nentembelo ngakumbi. Ndiyiphinda kwakhona: ukutshintsha uye ekunene yinjongo yinjongo.
Nangona kunjalo, yintoni kwakhona injongo kukuba olu uphawu ekugqibeleni luza kuqhushumba. Oko kukho ixesha loqoqosho ngebhombu phantsi koqoqosho. UBrandon Smith ovela kwiwebhusayithi ye-tar-market.com uyangenisa eli nqaku ukuba ijongeka kanjani ibhombu phantsi koqoqosho. Ewe kunjalo eli nqaku ibonisa ukuba ngokwenene sele sikwimeko yokwehla kwemali, kodwa imithombo yeendaba ithe cwaka ukuhlehlisa uvalo kude kube ngumzuzu ofanelekileyo. Nguwuphi umzuzu olungileyo ke? Lowo mzuzu ulungele ngokukhethekileyo uza emva kokufumana iingenelo ezinkulu kwezo ntshukumo zezopolitiko. Kwaye mhlawumbi le nkqubo kufuneka iqhubeke okwethutyana.
Ndithatha umbono wokuba umbono wokuchasana nokudityaniswa kwehlabathi kunye nokukhusela ilizwe kunye noqoqosho (kubandakanya nayo yonke enye into ethethwe phakathi kweengcinga 'zamaphiko asekhohlo') kufuneka kukhokelele ekukhuleni okukhulu kangaka kwenkxaso yokuba isoyikiso kuloo ntanda-bulumko ibetha njengebhombu. ogqiba onke amalungu alo mfanekiso welinge lokudla. Yiyo loo nto ke kufuneka ukuba uRobert Jensen akhule ngoku ngenkxaso, yiyo loo nto iFvD kunye neVarsers kufuneka ikhule ngenkxaso. Kutyhilwa ngobuchule bokuphoxisa abantu kunye nesandla esigciniweyo sinamathela ekunene. Uhlobo lwasekunene kufuneka lube lukhulu!
Okwangoku, umbono wamaphiko asekhohlo uqhubeka ngokusekwe kwimikhosi yentengiso engenasimahla kwaye ngasekhohlo kukuqiniswa kwinkampu yemozulu kunye ne-LGBTI hysteria. Sele sibona izimvo ezimbi malunga noku iinkampu zemfundo ziyavela. Kwangelo xesha sikwabona nabantwana omkhulu ongafakwanga kwezemfundo, kodwa nangamajelo eendaba nakwezentlalo. Ukwenza indoctrination kwesobunxele kuvulekile kwaye kubonakala ngathi kujolise ikakhulu kwizizukulwane ezizezona zincinci. Emva kwayo yonke loo nto, abo banabantu abancinci banekamva.
Ukuza kuthi ga ngoku ndinomdla wokubona inzuzo yelungelo okwethutyana. Kukho ithuba lokuba oku kuya kwandiswa kukhetho lwesibini lokuphumelela kukaDonald Trump kwaye kude kube lelo xesha iwotshi yexesha lezoqoqosho ibhombu iya kuphawula. Okwangoku, iingxinano zingakhukuliswa nangakumbi ngexhala lemozulu kwaye kusenokubakho iifayile zongcoliseko ezivela kwi-multinationals enkulu etafileni. Sisenokubona ukusebenza kweflegi enqabileyo eqinisa iingcinga zephiko lasekhohlo kwaye kufuneka mnyama ngombala. Ke, akuba ilungelo likhule ngokulingeneyo kangangokuba isiqingatha sehlabathi lasentshona lisihla emva kwalo, uqoqosho luphakame njengesaqhwithi esichazayo, kwaye kulandela ukuthoba okukhulu kwemali. Oko kuvula indlela yokungeniswa kolawulo lobuchasi-mbuso kunye nolawulo lobuzwilakhe, apho ubani athi abambelele kule ndlela ityhubhileyo yomkhuseli, uyala umnqweno wemozulu okanye ufuna ukugcina ubungqingili emhlabeni, kuya kufuneka ugobe okanye ulungiswe kwiiklinikhi zokufunda kwakhona.
Ngaba ayisiyiyo nje i-Vrijland encinci? Ndikhuthaza ukuba ufunde amanqaku am kwiiveki ezidlulileyo ngononophelo ukuze ufumanise ukuba oku akuhambelani kakhulu nokucinga ngentshabalalo, kodwa ngakumbi ukubona ukuba yeyiphi na imigaqo kunye nemilinganiselo, kodwa kwanayiphi na ipropaganda, zonke zikwisikhundla. izisiwe. Nditsho ukuba asisenako ukuthemba nayiphi na intshukumo yezopolitiko? Ngaba nditsho ukuba akukho ngqondo ukuvotela ilungelo (okanye ekhohlo)? Ndithatha isikhundla sokuba singqina ukukhutshwa kweskripthi esikhulu kwaye inkundla yasekhohlo yokuthelekisa elungelelaniswe kakuhle kwaye icwangciswe kakuhle. Kwaye eneneni ndithatha isikhundla sokuba asisenakuthembela kwezopolitiko. Ngaba ndilandela ukungavisisani? Ngaba andinguye nje kuphela ongenathemba kwaye awugungqi? Hayi, ndizama ukuvusa kwaye, ukusuka kumbono we-helikopta, ukujonga umhlaba ngokwahlukileyo. Ukuthatha oko kuphakanyiswa yimidiya entsha (njengoJensen.nl) ukuvusa iingcinga zephiko lasekhohlo. Uvuko endilubhengezayo lunento yokwenza nokutshintsha kokuqonda ngokupheleleyo. Ndithatha isikhundla sokuba ngokuthatha inxaxheba kumlo wasekhohlo uye ekunene siyokuncedisa ukubhetri.
Ukukhutshwa kweelinye ezimbini ezichaseneyo kwenzeka ngendlela evuthayo. Nje ukuba izintambo zixhunyiwe kudibaniso kunye neepali zokufumana, ufumana okwangoku ngqo kwicala elithile. Ispark esothusayo esiza kubakho kukuwohloka kwezoqoqosho. E-Europe ndinethuba elithile bendilindele ukuba i-Erdogan izakungena kwi-vacuum yamandla eza kuvela. Oko kulungiselelwe iminyaka ngoosopolitiki eBrussels, kodwa kwenziwa ngendlela engathandekiyo. U-Erdogan sele ebonisile ukuba ubona ukungabikho kokhokelo lokwenyani eBrussels. "IYurophu inayo intlekele enkulu yobunkokeliMsgstr "Uthe, ngeDisemba 10.
Ndiyakholelwa ukuba uDonald Trump uza kuyishiya i-NATO kuba ucinga ukuba amazwe ase-Europe awaneli galelo laneleyo kwaye, ngokombono wakhe, aziphatha ngokuzikhukhumalisa nangombulelo. Oku ke kudala i-vacuum yamandla omkhosi enokusetyenziswa ngu-Erdogan. Eyona nto ilahlekileyo yingxoxo eqinisekileyo yokuthatha i-Brussels. Le ngxoxo inokufumaneka ukuba uqoqosho luyaphazamiseka. Ukongeza, ngokuchasene nam, akufuneki ukuba siyikhuphe ngaphandle kobundlobongela basemkhosini, nangona abanye beya kuthi iTurkey ayinakuyenza nje loo nto. IFransi, emva kwayo yonke, ingamandla enyukliya. Ndingathanda ukukhankanya abantu abaza kugxeka isiseko somoya seTurkey Incirlik apho i-US inamfazwe angama-50. Ngaba uyazi ukuba ngubani onesitshixo sesiseko? Ukuba u-Erdogan ufuna ukukhaba abantu baseMelika kweso siseko, sisiqwenga sekeyiki. Ngapha koko, iTurkey inamandla enyukliya yePakistan njengoko iqabane elityala.
Yonke imikhosi yaseYurophu ayisiyomdlalo kwi-Turkey xa i-US isusa izandla kwilizwekazi lethu. Ewe, ulindelo lwam kukuba uTrump uza kuyishiya i-NATO. Nokuba uza kulinda de kuphele ulonyulo okanye uza kuyisebenzisa njengesixhobo sokuthengisa ukuze angenele ukhetho oluzayo njengomntu ongengomongameli wemfazwe, kuya kufuneka silinde kwaye sibone. I-Turkey inomkhosi wesibini onamandla ngaphakathi kwe-NATO. Ilizwe okwangoku lakha umzi-mveliso womkhosi ovuthiweyo kwaye linokuvelisa uninzi lwezixhobo emhlabeni wabo. Kukho nendiza yesihlanu yokulwa (i-TF-X) kwishedyuli kunye ne-Turkey ibhengeziwe kwiintsuku ezintathu ezidlulileyo ukukhawulezisa ukukhula kwale ndiza. Iinkcukacha eziqinisekileyo kukuba iBritish Rolce Roys iya kubonelela ienjini zeenqwelo moya.
Uyaqonda ukuba kuluncedo ukuba i-United Kingdom ayisayonxalenye ye-EU ukuba abase-Bhritane banikezela ngeenjini zeenqwelo-moya eziya kulwa imfazwe kwaye iTurkey iza kuhlasela iYurophu ngeBlitzkrieg. Ngaba uyazi ukuba uBoris Johnson unookhokho baseOttoman? Funda kodwa kube kanye. Ke ngubani kanye ophumelele unyulo e-UK?
I-Turkey, ngendlela, sele ibonakalise amazinyo kule veki ngokuchaza ukuba iya kuseka isiseko semikhosi eLibya. Elo lizwe laphoswa kwi-chaos yi-NATO ngokuthumela kwi-proxy Army kunye nokucoca uGaddafi. Ngapha koko, iTurkey ithatha eli lizwe inenqaku elinye. Umyalezo ucacile: sihlala phantsi kwaye ukuba ukhathazekile sithumela imikhosi (yabona apha ngolwazi olungaphaya lwasemva).
Ngoku ndiyacinga ukuba ucinga:Kuhle, ukuba i-Erdogan iza kulungelelwano eYurophu, ubuncinci sinengalo eyomeleleyo ecoca kakuhle isandla sasekhohlo. Emva koko kuya kufuneka sisebenzisane nolawulo lwamaSilamsi, kodwa ke siya kuthi sinciphise oko kungasebenzi kakuhle kwe-LGBTI kwaye mhlawumbi nokuhlaselwa kwemozulu.. ”Ndicinga ukuba abo banokudana kwaye bafumanise ukuba u-Erdogan akazukutshintsha kakhulu ngale nkqubo. I-Islam inokulawula imimandla yaseYurophu, kodwa ucinga ntoni ngenkululeko efanayo neyobuSilamsi esayibonayo kubuKristu? Ngamafutshane, i-Islam ikwanokwenzeka ukuba ithathe inxaxheba kwi-ajenda ye-LGBTI. Ngayiphi na imeko, ayiyi kuphazamiseka kwangoko. Ubukhosi obukhulayo be-Ottoman ngokuqinisekileyo abuyi kuphazamisa kakhulu kwiimpawu ezikhoyo zenkcubeko kwaye ngokuqinisekileyo ziya kushiya ukhetho lwenkolo lwabantu bodwa. Awudingi inkokheli eyomeleleyo ebeka ukuba yingcinezelo.
Ubukhosi obukhulayo beOttoman kungenzeka ukuba buze nezisombululo zetekhnoloji, kwaye i-ajenda yemozulu nayo iya kuqaliswa. I-Turkey sele ihlolile imali yayo yelizwe ye-crypto kwaye kukho ithuba elifanelekileyo lokuba iTurkey izise inkqubo entsha yaseYurophu, apho intaba yamatyala eyakhiwe ngebhanki yaseYurophu iya kubuyiselwa. (Yifunde apha ingcaciso). I-Turkey ke iya kuba nokwenyusa i-ajenda yasekhompyutheni yobusoshiyali baseYurophu.
Ngaba ngoku ndixela kweli nqaku ukuba iinginginya azinangqondo ngokwaneleyo ukuba zibone ngezinto? Nditsho ngoku ukuba abantu abadlala nje badlalwa ngomkhamo omkhulu kwaye lonto imisela isiphumo sonyulo? Ngaba ngoku ndixela ukuba yonke into ilawulwa ngokupheleleyo? Hayi, ndiyakhanya Kulungile indlela abantu abakhokelwa ngayo kwicala elithile kusetyenziswa imidiya, imidiya yoluntu kunye nedatha enkulu kwinqanaba elikufutshane kakhulu. Kwincwadi yam ndicacisa ukuba ngokweenkcukacha ngakumbi kwaye ndibonisa ukuba kukho iskripthi esiphambili apho ukuthathwa kweYurophu yiTurkey kunye nemfazwe yehlabathi yesithathu kucetywayo. Ngokubhekisele kum, kubaluleke kakhulu ukubona ukuba udlalwa kweliphi inqanaba kwaye udlalwa kangakanani. Oko akuthethi ukuba sizizidenge kakhulu, kungenxa yokuba le nkqubo sifumana kuyo yonke indawo ukusuka ekubelekeni ukuya engcwabeni. Silumke ngokwenene kwaye siyakwazi ukubona izinto. Kwincwadi ndinika isishwankathelo esifutshane somaleko ngamnye wenkqubo, ndicacisa iskripthi master kwaye ndicacisa ukuba sisiphi isisombululo esikhoyo. Lixesha! Ixesha lokubona ngezinto. Okanye ukuba kunye Xander izindaba Ukuthetha: Wonke umntu kufuneka afunde incwadi "Eyona nto siyibona ngayo!"
Uludwe lwekhonkco lovimba: volkskrant.nl, alt-market.com, hurriyetdailynews.com, ahvalnews.com, theguardian.com, rt.com, theguardian.com
U-Erdogan ubiza umhlaba wamaSulumane ukuba uhlangane
Ngaba u-Boris Johnson (okhokho base-Ottoman) unokuqalisa isiphithiphithi eYurophu esiya kuphakamisa uBukhosi base-Ottoman?
tags: Boris, Erdogan, EU, eziziimbalasane, Forum, FvD, ukunyuka, UJohnson Brexit deal, Ubukumkani, Nexit, Ottoman, uloyiso, faka phakathi, sityebi, ngexilongo, turkey, Manyene, VK, VS, phu melela
14 Disemba 2019 kwi-19: 51
Njengawe, bendibhala i-10 iminyaka malunga nezicwangciso zaseTurkey zokubuyisela ubukhosi base-Ottoman (kwihlabathi), kubandakanya nokufakwa (kweenxalenye) zeYurophu (kwiiBalkan eziqale ngokungena, ngemali yaseTurkey ibe yinto enye emva kwe enye mosque. Ukuhlaselwa kweTurkey okunokucaphukisa ngokuchanekileyo xa ilungelo lisemandleni, kwaye amanyathelo aqatha anokuthathwa ngokuchasene nezigidi zabafuduki abatsha abaza kuziswa apha kwiminyaka ezayo. Masithi zibangela iingxaki ezininzi kangangokuba bavalelwe ezinkampini, emva koko iyaqondakala into yokuba amaTurkey eza 'azikhulule', encediswa ngabantu abaphilayo nabasebenza 'i-Grey Wolves', kwaye nangoku baphikise 'ukuphika' kuka-Antifa. amaqela. Kodwa imeko yakho ngokuqinisekileyo iyavakala icacile.
Kwiminyaka embalwa edlulileyo inkonzo yezokhuseleko yaseJamani yalumkisa ukuba iTurkey ibisebenza ngezixhobo zenyukliya ngasese ixesha elide kakhulu (inokwenzeka ngokusebenzisana nePakistan kunye / okanye ne-Iran). Ke nokuba i-50 yayiza kuthathwa ngamaMelika e-Incirlik, u-Erdogan ngequbuliso wayenokuthi abeke izixhobo zakhe zenyukliya njengomvundla kwisigqoko esiphezulu.
Ngexesha lothetha-thethwano phakathi kwe-EU kunye neTurkey kwiimbaleki zaseSyria, iindaba ezinkulu zaseMelika zazibizwa ngokuba "yinkosana yaseYurophu" ngenxa yokuba i-EU yamnika indlela phantse kuwo onke amanqaku. U-Erdogan ngokwakhe ubhengeze oku njengesihloko esinengqondo esifanelekileyo, mhlawumbi ngenxa yokuba kwixesha elithile elingekude kakhulu uya kuthi ngokoqobo abe "yinkosana." Nangona igama lakhe liza kuba 'nguCaliph', kuba iinkokeli zamaSilamsi eziphakamileyo kwihlabathi sele zichazile ukuba ukho kwaye kungekudala uza kulawula lonke ilizwe lamaSilamsi (ngaphandle kweSaudi Arabia, eya kuthi imelane kodwa itshatyalaliswe ngezixhobo zenyukliya zaseTurkey kunye / okanye zaseIran) , Ndicinga).
Kukho ezinye iikhadi zasendle, ezinjengeRussia. Ngoku amaRussia namaTurks babonakala besebenza kunye ngeendlela ezahlukeneyo, kodwa abasokuze babe ngabahlobo. Sele balwa iimfazwe zamagazi ezahlukileyo kunye. Ndicinga ukuba kamsinya nje xa amaTurkey ehlasela iMpuma Yurophu kwaye ethatha iiBalkan, abayi kuyonwabela loo nto eMoscow kwaye abayi kulinda.
Elinye ikhadi lasendle ngu-Israyeli, ubuncinci i-80, kodwa ngokutsho kolunye uqikelelo, iibhombu zenyukliya ze-200. Baza kusabela njani kolo loyiso lwaseTurkey oluzayo ukutyhubela uMbindi Mpuma, eCaucasus, eMntla Afrika naseYurophu? U-Erdogan uthembise amaxesha angenakubalwa ukuba "akhulule" iJamani kunye nePalestina. IFrance ayinakoyika ukusebenzisa izixhobo zenyukliya ukuzikhusela, kodwa ndicinga ukuba i-Israel iyayenza. Kwaye ke sisondele kakhulu kwisiphelo sesimo esicwangcisiweyo kwi-WO-3 kunye 'neArmagedon'.
14 Disemba 2019 kwi-22: 18
Xa ndibhala eli nqaku, ndacinga ngenketho yokuba ilungelo ngamanye amaxesha linokuncedwa kwaye into oyichazayo iyenzeka. Zombini ezi meko zibonakala zinokwenzeka. Ngokwenene iscript esisekhohlo nasekunene sinokwenzeka. Intlawulo iya kuba njalo.
Kukho into ekuthethwa ngayo ngesimo apho i-wing-win win in the US (apho uTrump ahleli khona). UTrump unokuhamba kunye no-Israyeli ngokuchasene namandla amakhulu amaSilamsi. Nangona kunjalo, ndicinga ukuba ekhohlo sele inzulu kakhulu kwinqaba yaseBrussels ukuba ingakwazi ukwenza nantoni na ngayo.
Okwangoku, ndicinga ukuba imeko endiyichazile ngokubhekisele kwi-EU isemgceni wolindelo kuba ngoku sisemngciphekweni weengxaki zemali.
E-US, kunjalo, oku kungabuyekezwa ngomthetho wemfazwe obhengezwe nguTrump. Ngokwe-master script, iMelika kufuneka ngenkcazo iqhubeke isesandleni sika-Israyeli. Emva kwayo yonke loo mfazwe yehlabathi yokugqibela (ngokombhalo we-master) iya kuhamba phakathi kwehlabathi lamaSilamsi kunye nentsalela yeZionism (iya kujikeleza iJerusalem).
Okwangoku ndiza kubambelela kwimeko eboniswe kwinqaku.
14 Disemba 2019 kwi-23: 57
Andicingi ukuba izixhobo zenyukliya ziya kumisela ukulingana kwamandla, kodwa ukuba, njengemfazwe enkulu yonke, siya kujongana nengxaki yetekhnoloji. Le mfazwe yehlabathi yesithathu isenokuba sele iqalile ngempahla yasendaweni ye-kinetic njengokuqhuma okuninzi kwindawo zokugcina amachiza anje nge-inianjin, i-twin tower, iipateni ezingaqhelekanga kwimililo yehlathi, isaqhwithi esibi kunye nezinye iipateni zemozulu, ezixhaswe ngezinye izixhobo ezifana nezixhobo zemali. ezinje ngokudlulela ngokunqumleza amazwe ukuba enze isiphithiphithi sezemali nezoqoqosho, njengeGrisi, neVenezuela.
15 Disemba 2019 kwi-11: 06
Ngokuqinisekileyo kunokwenzeka ukuba iTurkey ihlasele iYurophu.
Oku akukhona ukusasaza ubuSilamsi! Ukuba ufuna ukuphazamisa inkqubo funda iYurophu ungasebenzisa izinto zangaphakathi nangaphandle. Ngaphakathi kukufuduka kunye nokuqhekezwa kwexabiso eluntwini. Ngaphandle, ke, kuhlaselo lwangaphandle. Zombini zilungele ukuwa kwenkqubo. Ukuba iTurkey ihlasela, oku kuthunyelwe ngu ...
Maninzi kakhulu amazwe aseMbindi Mpuma anokuthi ahlasele iTurkey, ngakumbi ukuba ubanga lilizwe lamaSilamsi lokwenyani. Kukho abantu abathi inkokheli yeTurkey ayinayo imvelaphi yangempela yamaSilamsi. Umbhali waseTurkey obhale ngale nto wabulawa. Well, ngubani lo ucwangcisa lento? ??? Ukurhoxiswa okunokwenzeka kweTrump kwi-NATO kuyinxalenye yeskripthi.
Yonke icingelwe ngaphandle. Kusenokwenzeka ukuba bacothe. Ewe, becwangcisile oku kwizizukulwana, kwiinkulungwane ezininzi.
15 Disemba 2019 kwi-21: 41
Njengoko kuchaziwe kwinqaku elingasentla:
« Injongo yangoLwesihlanu: indlela abantwana ezikolweni baxineke ngayo sisasazi se-LGBTI
Ibhayibhile sele yenziwe ukuba kungathathelwa ngocalucalulo ngokwesini, kodwa umsebenzi uyenziwa kwi-Quran engathathi hlangothi »
Iindwendwe ezipheleleyo: 15.863.256
ILibya ibonelela ngokucacileyo malunga namazwe aseYurophu ukuba angowokuqala ukuthathwa yiTurkey
Indoda enguTransgender izala umntwana weqabane elingelo-bhayibhile kunye nomntu onikelayo isidoda
Ngaba inkqubo ye-Iranian yokulwa nenqwelomoya eyathatha i-Boeing 737-800 (indiza ye-PS752) iphoswe?
Lixesha elingakanani uTrump ekule ntlungu ngoku ukuba iimpawu zokuqala zemfazwe yamakhaya ziye zibonakale?
I-Iran, ukuhlasela kweSoleimani, ukuhlasela kunye nokudubula kwi-PS752 yonke isetwaleni?
UMartin Vrijland op ILibya ibonelela ngokucacileyo malunga namazwe aseYurophu ukuba angowokuqala ukuthathwa yiTurkey
SalmonInClick op Ngaba inkqubo ye-Iranian yokulwa nenqwelomoya eyathatha i-Boeing 737-800 (indiza ye-PS752) iphoswe?
Riffian op Ngaba inkqubo ye-Iranian yokulwa nenqwelomoya eyathatha i-Boeing 737-800 (indiza ye-PS752) iphoswe?